मोटोपन घटाउन यी गल्ती त गर्नुभएको छैन ? कपालको होला नास – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/मोटोपन घटाउन यी गल्ती त गर्नुभएको छैन ? कपालको होला नास
काठमाडौँ । मोटोपनको समस्या रहेका मानिसहरु आफ्नो वजन घटाउनका लागि किटो डाइट प्रयोग गर्दछन्। किटो डाइट भनेको कार्बोहाइड्रेड कम गरेर चिल्लो पदार्थयुक्त खानाबाट मात्रै डाइट पैदा गर्नु हो।
किटो डाइटमा थोरै कार्बोहाइड्रेड, मध्यम प्रोटिन र उच्च मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुने गर्दछ । विशेषगरी चलचित्रका नायक नायिकाहरु समेत आफ्नो शरीरलाई फिट राख्नको लागि यस्तो डाइटको प्रयोग गर्छन् ।
यस्तो डाइट हाम्रो शरीरलाई फिट राख्न र रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्न फाइदाजनक मानिन्छ । तर, धेरै मात्रामा चिल्लो पदार्थ र कम मात्रामा कार्बोहाइड्रेड युक्त खाना साइड इफेक्ट पनि हुन सक्छ । जसमध्ये एक हो कपाल धेरै र्झनु।
किटो आहारले किन र्झछ कपाल ?
किटो आहारको फाइदासँगसँगै नोक्सानी पनि धेरै छ । किटो डाइटले एकातर्फ वजन घटाउन फाइदा पुर्‍याउँछ भने कपाल र्झने जस्तो समस्या पनि यसले निम्त्याउँछ । तर, किटो डाइट प्रयोग गर्ने सबैलाई यस्तो समस्या हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।
जसले यसको सही प्रयोग गर्छन्, उनीहरुमा कपाल र्झने समस्या देखिँदैन । यसको प्रयोग गर्न नजान्नेहरुमा मात्रै यस्तो समस्या देखिने गर्छ । कपाल र्झने अरु पनि कारणहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ।
किटो डाइटका कारण मानिसहरुमा तनाव सिर्जना हुने गर्छ । यसको साथ आफ्नो जीवनशैलीमा केही बदलाव ल्याउनु जरुरी हुन्छ। यदि पूरा निद्रा लिन नसकेको बेला र उपवासको समयमा यस्तो डाइटको प्रयोग गरेमा उल्टै समस्या सिर्जना गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो थाइराइड ग्रन्थीमा गडबडी हुन्छ । जसका कारण हाम्रो एड्रेनालाइन ग्रन्थी प्रभावित गर्न सक्छ ।
यहाँसम्म कि यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत कमी ल्याउने गर्छ । जसका कारण पनि हाम्रो कपाल र्झने गर्छ ।
यसको रोकथामका लागि पनि धेरै उपायहरु छन् । त्यसमा सबैभन्दा सजिलो र महत्वपूर्ण उपाय हो आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु ।
यसबाट बच्नका लागि हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा थोरै भएपनि बदलाव ल्याउँदै जानुपर्छ । किटो डाइटको प्रयोग गर्नेहरु दैनिक कम्तिमा ७ देखि ८ घण्टासम्म सुत्नुपर्छ । एक दिनमा केवल एक वा दुई कप कफीको सेवन पनि गर्नुपर्छ ।
पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन आवश्यक
पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन नपाउँदा पनि किटो डाइट प्रयोग गर्नेहरुका कपाल र्झने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले प्रोटिनको प्रयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
जबकी प्रोटिनको कमीका कारण कपाल र्झनु एक अर्को पनि कारण हो । यसको लागि पनि किटो डाइट प्रयोग गर्नेहरुले प्रोटिनको मात्रा बढाउनु पर्छ । प्रोटिनको मात्रामा कमी भएमा मानिसमा कुपोषण हुने गर्छ । जसका कारण पनि कपाल र्झने गर्छ ।
एक अध्ययनले भिटामिन, मिनरल्सको कमी र कपालको स्वास्थ्यसँग किटो डाइटको सम्बन्ध देखाएको थियो ।
जसमा प्रतियोगीहरुको कपाल पातलो हुनमा जिंक जस्ता एसिडको प्रयोगको कमीका कारण भएको पाइएको थियो। त्यसैले पनि कपाल र्झने समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि भिटामिन र मिनरल्सको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ।
यसबाहेक बायोटिनको कमी, आफ्नो दिनचर्यामा बदलाव जस्ता सुधारबाट हामीले कपाल र्झने समस्या मुक्ति पाउन सक्छौं।